एचआईभी संक्रमितको यौन व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ ? – Dullu Khabar
१३ माघ २०७६, सोमबार ०७:२२
एचआईभी संक्रमितको यौन व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ ? संक्रमित व्यक्तिले कसरी यौन आनन्द लिन सक्छ ?
जिज्ञासा : बी, चितवन
एचआईभी संक्रमण देखापरेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। एचआईभी संक्रमण सर्ने तरिका प्रायः सबैलाई थाहा भइसकेको भए पनि कन्डमको प्रयोग त्यति सहज भइरहेको छैन। तर, एचआईभी संक्रमितको स्वस्थ र रोमान्टिक यौनजीवनका लागि सबैभन्दा भरपर्दो साधन कन्डम नै हो। यदि संक्रमित व्यक्तिमा एचआईभी संक्रमण सक्रिय अवस्थामा छैन र भाइरल लोड पनि कम छ भने एचआईभी सर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। तर, एचआईभी संक्रमण सक्रिय अवस्थामा हुँदा एचआईभी सर्ने दर योनि–लिंग सम्पर्कमा दुई प्रतिशतसम्म र गुदद्वार मैथुनमा २० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ। शारीरिक सम्पर्कको क्रममा योनिमार्गमा जस्तो रसिलो र चिप्लो पदार्थ गुदद्वारमा उत्पादन नहुने हुनाले गुदद्वार मैथुनको क्रममा यसको सतहमा घर्षणको कारण आलो चोट पुग्ने र एचआईभी संक्रमण सर्ने सम्भावना बढी हुन गएको हो।
आफ्नै पार्टनरलाई एचआईभी संक्रमण भएको पत्ता लाग्दा वा पार्टनर एचआईभी संक्रमित हो भन्ने थाहा हुँदा जो कोही यौन सम्पर्क राख्न हच्किन्छन् नै। स्वाभाविक रूपमा त्रसित पनि हुन्छन्। यो मानवीय स्वभाव हो। छुँदा, हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा एचआईभी सर्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि एचआईभी संक्रमितलाई तिरस्कार गर्ने तथा सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गर्न थालिन्छ। संक्रमित व्यक्तिमा भाइरल लोड कम हुँदा वा संक्रमित व्यक्तिले नियमित रूपमा एआरटी (एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी) लिइरहेको खण्डमा संक्रमण सरिहाल्ने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने थाहा पाए पनि यस्तै सामाजिक मान्यताका कारण संक्रमित व्यक्तिले खुला रूपमा प्रस्ट तरिकाले ‘संक्रमित हुँ वा छु’ भन्दैनन्। एचआईभी संक्रमित व्यक्तिको यौनजीवनको सवालमा संक्रमण सर्न नदिने वा स्वस्थ यौनजीवन व्यतीत गर्ने पहिलो खुड्किलो भनेको यथेष्ट संवाद नै हो।
आपसी संवादको क्रममा आफ्नो संक्रमण अवस्था वा पार्टनरको संक्रमण अवस्था थाहा पाउनु जरुरी छ। एक अध्ययनअनुसार पुरुष समलिंगीबीच करिब ८८ प्रतिशतले आफ्नो संक्रमण स्थिति खुला रूपमा छलफल गर्ने गरे पनि आकस्मिक पार्टनर, अविश्वासिलो पार्टनर वा नयाँ पार्टनरबीच चाहिँ केवल ३० देखि ४० प्रतिशतले संक्रमण अवस्थाबारे छलफल गर्ने गरेको देखिन्छ। युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटाले अमेरिकाका छ प्रमुख शहरमा गरेको एक अध्ययनअनुसार पार्टनरबीच खुला रूपमा छलफल गर्नेहरूले संक्रमण घटाउन उचित कदम चाल्ने गरेको पाइयो।
अनिच्छित गर्भ रोक्नका लागि फेमिडोम (महिलाले प्रयोग गर्ने कन्डम) वा योनिभित्र राख्ने डायफ्राम प्रयोग गर्ने गरे पनि सेफ सेक्स अर्थात् स्वस्थ यौनजीवनका लागि पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम नै बढी प्रभावकारी देखिएको छ। कन्डमको प्रयोगभन्दा पनि सही तरिकाले कन्डम प्रयोग गर्नु चाहिँ एचआईभी संक्रमण रोक्न बढ्ता महत्त्वपूर्ण छ। अध्ययनअनुसार सही तरिकाले कन्डम प्रयोग गर्न सक्ने आत्मविश्वासी पुरुष पार्टनरले सेफ सेक्स प्य्राक्टिस गर्ने सम्भावना पनि बढी देखिएको छ।
कन्डमको प्रयोग योनि–लिंग सम्पर्कको क्रममा मात्र होइन, गुदद्वार मैथुनमा त झन् बढी महत्त्वको छ। माथि उल्लेख गरेझैं योनिस्रावजस्तो चिप्लो पदार्थ उत्पादन नहुने तथा तुलनात्मक रूपमा खस्रो सतह हुने मलद्वारमा यौन सम्पर्कको क्रममा लाग्न सक्ने चोट घटाउन तथा एचआईभी संक्रमण घटाउन वाटरबेस्ड लुब्रिकेन्ट (पानीमा आधारित चिप्लो पार्ने तरल पदार्थ) सँगै कन्डमको प्रयोगले निकै सघाउँछ। गुदद्वार मैथुन, योनि–लिंग मैथुन वा यौन खेलौनाबाट यौन आनन्द लिने क्रममा नै किन नहोस्, प्रत्येक पटक नयाँ कन्डम प्रयोग गर्नुपर्छ।
सन् २०१७ मा गरिएका ३२ वटा अध्ययनको पुनरावलोकनअनुसार एचआईभी संक्रमितलाई सामाजिक कलंकका रूपमा लिनु नै तिनीहरूको यौनजीवन खलबलिनुको प्रमुख कारण हो। एचआईभी संक्रमितमा डिप्रेसन, चिन्ता तथा अन्य मनोसामाजिक समस्या विकसित हुन नदिन उनीहरूलाई प्रेम र स्नेह प्रदान गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको व्यवहार नजिकको पार्टनरको दायित्व पनि हो। एचआईभी संक्रमितसँग योनि–लिंग सम्पर्क वा गुदद्वार मैथुनबाट मात्र यौन आनन्द लिनुपर्छ। क्यानडामा गरिएको अध्ययनअनुसार संक्रमितमध्ये २५ प्रतिशतले योनि–लिंग सम्पर्क नगरीकनै स्वस्थ यौनजीवन बिताइरहेको पाइएको छ। यौन आनन्द प्राप्त गर्ने वा दिने वैकल्पिक उपायमा अँगालो हाल्ने, सतही चुम्बन गर्ने, शारीरिक स्पर्श गर्ने, सुम्सुम्याउने, योनिमा औँला घुसार्ने, यौन खेलौनाबाट आनन्द दिने तथा एकापसमा हस्तमैथुन गरेर पनि यौन आनन्द लिन सकिन्छ। औँला छिराउने तथा महिला पार्टनरको हस्तमैथुन गर्ने क्रममा पुरुष पार्टनरले पञ्जा (सर्जिकल ग्लोभ) लगाउन आवश्यक छ। संक्रमित व्यक्तिको हात समाएर स्नेह दर्शाउँदा पनि उसको मनोबल उच्च हुन्छ। यस्तो किसिमको व्यवहारले एचआईभी विरुद्धको औषधिको प्रभावकारिता बढ्छ भने व्यक्तिको आयु पनि लम्बिन्छ।
एचआईभी संक्रमितसँग वा संक्रमितको यौनजीवनको हकमा प्रश्न गर्न सक्नु वा गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ एवं आकस्मिक पार्टनरसँग प्रत्येक पटकको यौन व्यवहारअघि आफ्नो एचआईभी अवस्थाको जानकारी दिनुका साथै तिम्रो एचआईभी अवस्था के छ ? यौन सम्पर्कअघि रगत परीक्षण गराउन तयार छौ ? जीवनमा कहिल्यै सुई साटासाट गरेका छौ ? तिम्रा अन्य कति जना पार्टनर छन् वा कति जनासँग यौन सम्पर्क गरिसक्यौ ? यदि संक्रमित हो भने भाइरल लोड अर्थात् सीडी फोर काउन्ट (संक्रमणको अवस्था जनाउने) कति छ ? कन्डम प्रयोग गर्न राजी छौ ? कन्डम प्रयोग गरी यौन सम्पर्क राख्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ ? सही तरिकाले कन्डम लगाउन आउँछ ? जस्ता प्रश्न गर्न आवश्यक छ। र, यति हुँदाहुँदै पनि आपूmलाई यौन सम्पर्क राख्न इच्छा छैन भन्ने प्रस्ट भन्न सक्नुपर्छ। आफ्नो पार्टनरलाई कन्डम प्रयोग गर्न लगाउन बाध्य पार्ने वा पछि–पछि पनि प्रत्येक पटकमा कन्डम प्रयोग गर्न बानी पार्ने सही समय यौन सम्पर्कअगाडिको समय नै हो।
Source: नेपाल आज